चिकित्सा शिक्षा विधेयक अघि नबढाउन डा. केसीको चेतावनी - Everest Dainik - News from Nepal
चिकित्सा शिक्षा विधेयक अघि नबढाउन डा. केसीको चेतावनी
काठमाडौं, भदौं ३। चिकित्सा शिक्षा विधेयक यथास्थितिमा अघि नबढाउन प्राडा गोविन्द केसीले चेतावनी दिएका छन् ।
संसदको महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण समितिले पास गरेको विधेयकमा माथेमा प्रतिवेदन र आफूहरु दिएको सुझाव नसमेटिएकोले अहिलेकै विधेयक अघि नढाउन चेतानी दिएका हुन ।
२३ दिन लामो आमरण अनशन स्थगितपछि त्रिबि शिक्षण अस्पतालमा महारागंजमा उपचाररत डा केसीले शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै, ‘ अहिलेको अवस्थामा कुनै पनि हालतमा चिकित्सा शिक्षा विधेयक अघि नबढाउने व्यवस्था मिलाउन ध्यानाकर्षण गराउँछौं ।’
जालझेलपूर्वक अहिलेकै अवस्थामा विधेयक पारित गर्ने प्रयास गरे सत्याग्रहसहित विरोधका कार्यक्रम शुरु गर्ने डा केसीको चेतावनी छ ।
याे पनि पढ्नुस अदालतमा आमनेसामने
ट्याग्स: Chikitsa Sikshya Bill, Dr Govind kc